Uvimba woLondolozo lwezeMfundo »IYunivesithi yaseHodges
Izifundo, IHodges Qhagamshela
IYunivesithi yaseHodges inceda ukugcwalisa izikhewu zabasebenzi ngeHodges Qhagamshela iHodges University iyaphendula umnxeba wophuhliso lwabasebenzi ngezakhono zethu zoqeqesho, i-Professional Education and Training (PET), ebizwa ngokuba yiHodges Connect. IHodges Connect imalunga nokunikezela abasebenzi bethu ukhuphiswano kwaye yenzelwe ukulungiselela abasebenzi ngezakhono ezifunwa ngumqeshi eziyimfuneko [...]	Funda Okuninzi
Ikhonkco phakathi kweMfundo ePhakamileyo kunye nabasebenzi
Izifundo, Ubomi bekhampasi
Ibhalwe ngu: Gqirha John Meyer, Mongameli, Hodges University Ngeedigri ezintandathu zokwahlukana, unokwenza unxibelelwano olungenakulindeleka. Unxibelelwano phakathi kwemfundo ephakamileyo kunye nabasebenzi ngqo. KwiYunivesithi yaseHodges, siyaqonda unxibelelwano phakathi kwemfundo kunye nokufumana izakhono zobungcali kwaye siyile iidigri zethu kunye nokuqinisekiswa ngokukodwa ukugcwalisa iimfuno zabasebenzi [...]	Funda Okuninzi
Ukutyunjwa okutsha kwe-VP ePhakamileyo yeMicimbi yezeMfundo
Izifundo, Ubomi bekhampasi, IFakhalthi kunye nabasebenzi
Ndiyakuvuyela uMarie Collins! U-Hodges Utyumba i-VP eyi-Senior VP yezeMicimbi yezeMfundo uGqirha Marie Collins otyunjwe njenge-sekela mongameli omkhulu kwimicimbi yezemfundo kwiYunivesithi yaseHodges. Kule ndawo, uya kunceda ukujongana nemiba yezemfundo yeyunivesithi, kubandakanywa ukuphuhliswa nokuphunyezwa kokuphucula izifundo ezikhoyo kunye nezifundo, ngaphezu kokuqalisa ezintsha [...]	Funda Okuninzi
Siyazingca ngokuza nooNesi bethu be2019!
Siyavuyisana nabahlengikazi bethu be-2019! Ngomhla we-10 kaMeyi, i-2019, iYunivesithi yaseHodges yayizingca ngokusingatha uMnyhadala wokuPina kwabahlengikazi abaphumeleleyo kulo nyaka. Yeyiphi indlela entle yokubhiyozela iVeki yaBongikazi! Umsitho wethu wokuphina lixesha elikhethekileyo labongikazi bethu kwaye iseshoni ka-2019 ibingomnye umsitho okhethekileyo. Umongikazi ngamnye wasebenza nzima ukufikelela [...]	Funda Okuninzi
100% Ireyithi yokuPasa yeSizwe
Iipesenti ezili-100 zoVavanyo lweSizwe lokuPasa Siyavuyisana neHodges University's 2017's Physical Therapist Assistant class for 100% Rate Rate on their national exams! Indlela yokumela iHodges U! Siyazingca ngokukubiza ngokuba sisiHodges Alumni esibekekileyo.	Funda Okuninzi
Iindlela zikaHodges eziya eMpumelelweni zibonelela ngeNkqubo eNtsha kunye nokuFikelela
Iindlela zikaHodges eziya eMpumelelweni zibonelela ngeNkqubo eNtsha kunye nokuFikelela kumzamo wokubonelela abafundi "ngeenkqubo ezintsha kunye nokufikeleleka okukhulu," uGqirha John Meyer, umongameli weYunivesithi yaseHodges, uxoxa ngeendlela ezintsha zeyunivesithi eziya eMpumelelweni ngoMgqibelo, Okthobha 27, 2018 uhlelo lweNaples Daily News. Funda inqaku elipheleleyo apha. Ndwendwela iindlela.hodges.edu ukufumana [...]	Funda Okuninzi
INkokeli yasekhaya - #MyHodgesStory kaJacob WingeUJacob Winge ngumzekelo wokwenyani wento ethethwa kukuba yinkokeli, kwaye njengeWinge, uninzi lwabafundi abakhetha ukufumana isidanga banqwenela ukuba yinto engaphaya- ukuthatha uxanduva nokwenza ifuthe. Kuphela phakathi kwe-20s yakhe, ubandakanyeka ngakumbi [...]	Funda Okuninzi
IziBonelelo eziNtathu zokufumana isiDanga sokuPhuculo loMsebenzi wakho
IziBonelelo eziNtathu zokuFumana isiDanga sokuPhucula iMfundo yakho yaBadala Abafundi abadala babuyela esikolweni ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Amaxesha amaninzi, ubomi buba sengozini kwaye busibangele ukuba sibekele ecaleni iinjongo zethu; Nangona kunjalo, ukuba uzifumene umile emsebenzini wakho, ukubuyela esikolweni kunokuba yeyona mpendulo ubuyiyo [...]	Funda Okuninzi
Iingcali zeshishini eziphumeleleyo zichonga iimpawu ezi-8 zeNkokeli elungileyo
Iingcali zeshishini eziphumeleleyo zichonga iiMpawu ezi-8 zeNkokeli elungileyo Sonke singachonga abaphathi okanye abacebisi ababalaseleyo kubomi bethu, kodwa ngamanye amaxesha kuba nzima ukukhomba izakhono ezibenze babaluleka kangaka - ngakumbi xa ungakhange ubambe indima yobunkokeli ngokwakho. Ngaba yinkokeli esebenzayo umntu onokuchaza nje ngokulula [...]	Funda Okuninzi
Iindlela ezi-4 ze-MBA ezinokukunceda ukuPhucula umsebenzi wakho
Iindlela ezi-4 ze-MBA ezinokukunceda ukuPhucula umsebenzi wakho weMbali ngokwembali, indlela eya kwinkqubela phambili yomsebenzi ibandakanye ukuzinikela kunye nokusebenza ngokuma kwelinye umbutho. Ukuvuma komqeshwa kunye nokukwazi ukujongana nemiceli mngeni emitsha kwabonakala ngathi kwanele. Ngoku, nangona kunjalo, uninzi lwamashishini luyakhuphisana kangangokuba abaviwa babonakala ngathi kufuneka benze ngakumbi nangakumbi kwi [...]	Funda Okuninzi